Inside Out လူနေအိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွင်းပိုင်း - ဒီဇိုင်းမဂ္ဂဇင်း
လူနေအိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွင်းပိုင်း ပထမ ဦး ဆုံးလွတ်လပ်သောတစ်ကိုယ်တော်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကိုဗိသုကာဒီဇိုင်းပညာရှင်ကဂျပန်နှင့်နော်ဒစ်နိုင်ငံမှပရိဘောဂများရောနှော။ ရွေးချယ်ပြီးသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးသာယာသောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးသည်။ သစ်သားနှင့်ထည်များကိုအဓိကအားဖြင့်တိုက်ခန်းတစ်ခန်းလုံးတွင်အလင်းရောင်အနည်းဆုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ အဆိုပါအယူအဆ & quot; အတွင်းပိုင်း Out & quote; side ည့်ခန်းကိုဖွင့်နေစဉ်အတွင်းပိုင်း & quot; သစ်သားသေတ္တာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောသစ်သား ၀ င်ပေါက်နှင့်စင်္ကြံတို့ကိုဖော်ပြသည်။ အပြင် & quot; အဖြစ်အခန်းများနှင့်အတူစာအုပ်များနှင့်အနုပညာပြသမှု, ပြသခြင်း လူနေမှုလုပ်ငန်းဆောင်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရာများအိတ်ကပ်။
စီမံကိန်းအမည် : Inside Out, ဒီဇိုင်နာနာမည် : Tommy Hui, သုံးစွဲသူ၏အမည် : T.B.C. Studio.
လူနေအိမ်အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွင်းပိုင်း Tommy Hui Inside Out